Manchester City ayaa ciyaari doonta Champions League xilli ciyaareedka soo socda ka dib markii laga noqday ganaaxii saarnaa | Dusta News
Home > General > Manchester City ayaa ciyaari doonta Champions League xilli ciyaareedka soo socda ka dib markii laga noqday ganaaxii saarnaa
Manchester City ayaa ciyaari doonta Champions League xilli ciyaareedka soo socda ka dib markii laga noqday ganaaxii saarnaa
July 13, 2020 July 13, 2020 Dusta News313Leave a Comment on Manchester City ayaa ciyaari doonta Champions League xilli ciyaareedka soo socda ka dib markii laga noqday ganaaxii saarnaa
Manchester City ayaa ciyaari doonta Champions League xilli ciyaareedka soo socda ka dib markii Maxkamadda Xalinta Khilaafaadka Sport (CAS) ay ka laabatay ganaax labo sano ah oo ay kooxda ka saartay kubada cagta Yurub.
City ayaa waxaa ganaaxay guddiga maareynta dhaqaalaha ee kooxda UEFA bishii Febraayo ka dib markii ay “ku xadgudbeen” sharciga rukhsadda naadiyada iyo qawaaniinta caddaaladda ah ee ciyaarta.
Naadigan ka dheela horyaalka Premier League ayaa si adag u beeniyay in uu wax qalad ah sameeyay, waxuuna racfaan ka qaatay go’aanka CAS bishii la soo dhaafay, ka dib markii uu ku tilmaamtay nidaamka anshax marinta UEFA mid “midab takoor ah”.
Ka dib markii ay dhageysteen cadeymo muddo seddex maalmood ah bishii June, CAS ayaa haatan ka laabatay ganaaxa – taasoo la micno ah in City ay xor u tahay inay u tartanto Champions League xilli ciyaareedka soo socda, iyagoo xaqiijisanaya booska labaad ee Premier League ka dib markii ay Sabtidii 5-0 kaga badiyeen Brighton.
Isagoo hadlayay ciyaarta ka dib, Tababaraha City Pep Guardiola ayaa sheegay inuu kalsooni ku qabo in laga laabanayo ganaaxa isagoo sheegay in kooxdiisa ay u qalantay inay ka ciyaaraan tartamada waa weyn ee Yurub.
“Maanta waxaan gaarnay hal tartan aan caadi aheyn, kaasoo ah u qalmida Champions League xisaab ahaan,” Guardiola ayaa usheegay Sky Sports.
“Taasi waa caqabadda ugu weyn ee shardi u ah naadigan. Ciyaartoydanna waxay sameeyeen lixdii ama toddobadii sano ee ugu dambeysay.
“Waxaan uqalanay inaan halkaas joogno sababtoo ah waxaan ku badinay garoonka dhexdiisa. Waxaan rajeyneynaa isniinta UEFA in ay noo ogolaaneyso inaan u ciyaarno sida kooxdan oo kale, ciyaartoyduna waa u qalmaan.”
Roob xoog leh oo ka da’ay Muqdisho iyo Saameyn ka dhalatay
Dab ka kacay kaalin shidaal oo ku taala Dhuusamareeb